ယူရိုပါလိဂ်မှာ အုပ်စုချောင်နေတဲ့ အာဆင်နယ်နဲ့ ချယ်လ်ဆီး
ယူရိုပါလိဂ်မှာ ချယ်လ်ဆီးနဲ့ အာဆင်နယ် အုပ်စုက တက်ဖို့ အခြေအနေကောင်းသွားပြီ
1 Sep 2018 . 8:05 PM
၂၀၁၈-၁၉ ရာသီ ယူရိုပါလိဂ်အုပ်စု မဲခွဲပွဲကို ပြီးခဲ့တဲ့ ကြာသပတေးနေ့က ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အင်္ဂလန် ထိပ်သီးအသင်းတွေဖြစ်တဲ့ ချယ်လ်ဆီးနဲ့ အာဆင်နယ်တို့ အုပ်စုချောင်နေလို့ နောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့ အခြေအနေ ကောင်းသွားပါပြီ။ အာဆင်နယ်အသင်းဟာ Vorskla Poltava (ယူကရိန်း)၊ စပို့တင်းလစ္စဘွန်း (ပေါ်တူဂီ)၊ ကာရာဘတ် (အဇာဘိုင်ဂျန်) အသင်းတွေနဲ့ ကျရောက်ခဲ့ပြီး ချယ်လ်ဆီးအသင်းကတော့ FC BATE (ဘီလာရုစ်)၊ PAOK (ဂရိ)၊ MOL Vidi (ဟန်ဂေရီ)တို့နဲ့ ရင်ဆိုင်ရမှာပါ။
စပိန်ကလပ်တွေဖြစ်တဲ့ ဗီလာရီးယဲလ်၊ ဘက်တစ်တို့ဟာ အုပ်စုကျပ်ထဲ ကျရောက်ခဲ့ပြီး ယူရိုပါလိဂ်ဖလားကို စံချိန်တင်အဖြစ် (၅)ကြိမ်အထိရရှိခဲ့တဲ့ ဆီဗီလာအသင်းကတော့ ခရက်စ်နိုဒါ (ရုရှား)၊ စတန်းဒက်လိဂ် (ဘယ်လ်ဂျီယံ)၊ အက်ဟီဆာစပေါ် (တူရကီ)တို့နဲ့ ဆုံတွေ့ရမှာဖြစ်လို့ အုပ်စုချောင်ခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၈-၁၉ ယူရိုပါလိဂ် အုပ်စုများ
Group A: Bayer Leverkusen , Ludogorets, Zürich, AEK Larnaca
Group C: Zenit, København, Bordeaux , Slavia Praha
Group D: Anderlecht, Fenerbahçe, Dinamo Zagreb, Spartak Trnava
Group E: Arsenal, Sporting CP, Qarabağ, Vorskla Poltava
Group I: Beşiktaş, Genk, Malmö, Sarpsborg
Group J: Sevilla, Krasnodar, Standard Liège, Akhisar Belediyespor
Photo:Kopitiam Bot,USA Today,UEFA
ယူရိုပါလိဂျမှာ ခယျြလျဆီးနဲ့ အာဆငျနယျ အုပျစုက တကျဖို့ အခွအေနကေောငျးသှားပွီ
၂၀၁၈-၁၉ ရာသီ ယူရိုပါလိဂျအုပျစု မဲခှဲပှဲကို ပွီးခဲ့တဲ့ ကွာသပတေးနကေ့ ကငျြးပပွုလုပျခဲ့ပွီး အင်ျဂလနျ ထိပျသီးအသငျးတှဖွေဈတဲ့ ခယျြလျဆီးနဲ့ အာဆငျနယျတို့ အုပျစုခြောငျနလေို့ နောကျတဈဆငျ့တကျဖို့ အခွအေနေ ကောငျးသှားပါပွီ။ အာဆငျနယျအသငျးဟာ Vorskla Poltava (ယူကရိနျး)၊ စပို့တငျးလစ်စဘှနျး (ပျေါတူဂီ)၊ ကာရာဘတျ (အဇာဘိုငျဂနျြ) အသငျးတှနေဲ့ ကရြောကျခဲ့ပွီး ခယျြလျဆီးအသငျးကတော့ FC BATE (ဘီလာရုဈ)၊ PAOK (ဂရိ)၊ MOL Vidi (ဟနျဂရေီ)တို့နဲ့ ရငျဆိုငျရမှာပါ။
စပိနျကလပျတှဖွေဈတဲ့ ဗီလာရီးယဲလျ၊ ဘကျတဈတို့ဟာ အုပျစုကပျြထဲ ကရြောကျခဲ့ပွီး ယူရိုပါလိဂျဖလားကို စံခြိနျတငျအဖွဈ (၅)ကွိမျအထိရရှိခဲ့တဲ့ ဆီဗီလာအသငျးကတော့ ခရကျဈနိုဒါ (ရုရှား)၊ စတနျးဒကျလိဂျ (ဘယျလျဂြီယံ)၊ အကျဟီဆာစပျေါ (တူရကီ)တို့နဲ့ ဆုံတှရေ့မှာဖွဈလို့ အုပျစုခြောငျခဲ့ပါတယျ။
၂၀၁၈-၁၉ ယူရိုပါလိဂျ အုပျစုမြား
by Ko Kyue .2mins ago